Dhegoculeys - Wikipedia
Astaanta caalamiga ah ee dadka Dhagoolka ah.
Dhegoculeys (Ingiriis: partial deafness) waa qof ama xayawaan wax yar maqli kara. Awood-darida maqalka badh ahaan waxaa loo yaqaanaa dhegoculeys, iyo guud ahaan loo yaqaanaa Dhagool.
Dhegaha oo ah xubinta ugu muhiimsan ee maqalka ayaa haddii ey wax gaaraan keenta dhagoollenimada. Sidoo kale qaybta maskaxda ee u qaabilsan maqalka ayaa dhagoollenimo keenta haday wax gaaraan.
In kastoo dad badani ku soo dhashaan dhagoolnimada, waxyaabo badan ayaa keena dhibtan, inta ugu badan waxaa ka mid ah duqoowga, shanqadh badan, iyo xanuuno ku dhaca dhegaha iyo maskaxda.
Qiyaasta dhagoolnimada ee dadka waxaa loo qeybiyaa sadex: dhegoculeys yar, mid dhexe iyo dhago la'aan dam ah - qof aan waxba maqli karin. Dhegoculeyska yar iyo dhexe ee xanuun ama gaboowgu keeno waa kuwo wax laga qaban karo. Qeyb ahaan waa la daaweeyaa haddii kale qalab lagu xidho dhegaha ayaa ka caawiya maqalka.
Tiro dhan 10% shacabka dunida ayaa dhagool ah ama maqalka dhib ka qaba; taas oo sanadkii 2004ta ay 124.2 milyan qof dhago la'aayeen.
Qeybaha Dhagoolka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Guud ahaan dhagoolnimada waxaa loo qeybiyaa labo nooc, mid lagu soo dhasho iyo mid qofka ku dhacda. Dadka ku soo dhasha dhagoolnimada ma hadli karaan isla markaana wax ma maqli karaan.
Dhinaca kale, waxaa jira tiro badan oo dad ah oo dhago la'aan ku dhacdo inta eey noolyihiin. Dadkani waxay noqdaan kuwo dhegoculus oo wax yar maqli kara iyo kuwo dem noqda oon gebi ahaan waxba maqli kari.
Sida xaqiiqda ah, maqalka dadku wuu kala duwan yahay. Maqalka qofka qaangaadhka caadiga ah wuxuu u dhexeeyaa 26 iyo 40 dB HL. Waxa la isticmaalaa qalab lagu cabiro heerka maqalka oo loo yaqaano Audiometric taas oo lagu qiyaaso halbeeg lagu magacaabo Dhesibel (Decibel) astaanteedu tahay dB LH. Cabirka Dhesibelku wuxuu sheegaa qiyaasta dhegoculeyska qofka.
Ayadoo la tixraacayo da'da qofka ayaa maqalka dadka loo kala saaraa dhowr nooc:
Maqal Caadi ah:
dadka qaangaadhka ah maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 26 iyo 40 dB HL.
caruurta caadiga ah maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 20 iyo 40 dB HL.
Dhegoculeys yar: dadkan cabirka maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 41 iyo 54 dB HL
Dhegoculeys mid dhexe: dadkan cabirka maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 71 iyo 90 dB HL
Dhegoculeys sareeya: dadkan cabirka maqalkoodu wuxuu u dhexeeyaa 91 dB HL iyo wixii ka sareeya, iyo
Dhagool dam ah - qof aan waxba maqli karin.
Waxyaabaha Keena Dhagoolnimada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Tirada dhagoolka iyo dadka dhagaha culus ee qaangaadhka ah sanadkii 2004. Tirada khaanaduhu waa 100,000 oo qof.
Dhagoolnimada inta badan waa mid dabiici ah oo lagu soo dhasho, halka dad badan ay dhego beelaan inta eey noolyihiin. Waxyaabo badan ayaa keena dhibtan, inta ugu badan waxaa ka mid ah duqoowga, shanqadh badan, iyo xanuuno ku dhaca dhegaha iyo maskaxda. Sidoo kale, waxaa jira tiro badan oo dad ah oo dhegoculeyska ka dhaxla waalidkood taas oo ku soo baxda wakhtiyo kala duwan oo noloshooda ah.
Caawinta Maqalka[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Qalabka maqalka ee qofka dhegaha culus ka caawisa in uu si fiican wax u maqlo.
Shaqsiyaadka dhegaha culus ee wax yar maqli kara waxa lagu caawiyaa daawooyin iyo qalab dhegaha la gashado oo codka soo qabta. Qalabkaas waxaa loo yaqaan Cochlear.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhegoculeys&oldid=167020"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 13:02, 20 Febraayo 2017.